17 Nzira Dzakagadzirwa Kuita $100 Pazuva - TMC App
17 Nzira Dzakagadzirwa Kuita $100 Zuva
Unoda mari? Dzidza maitiro ekuwana mari nekukurumidza neidzi nzira dzekuita madhora zana pazuva!
Iwe unoda kudzidza chaizvo kuita $100 pazuva?
Ndinozviwana. Unotambudzika. Iwe unochengetedza kuverenga zvinyorwa zvinokuvimbisa nzira dzekuita mari asi usinganyatso kupa.
Asi panguva ino, iwe uri munzvimbo yakakodzera!
Ini ndanga ndichishanda nenzira dzekuwana mari online kweanopfuura makore mashanu izvozvi, uye zvakare ndakadzidza hunyanzvi kana kupfuura panzira dzangu dzekugadzira mihoro yenhamba-nhanhatu.
Ini handisi kunyanya kunyepa: chokwadi ndechekuti iwe uchafanirwa kuisa rimwe basa kuti uite mari yemari. Nekudaro kune dzimwe nzira dzakangwara dzekuwana mari kunze uko kana iwe uri pamusoro pechipingamupinyi!
Izvi ndizvo zvaunokwanisa kuita mari yakawanda kwauri:
Kukubatsira kuchengetedza mari pamwe nekubhadhara chisungo chako chemari.
Bhadhara mari yako kupera kwemwedzi.
Rubatsiro iwe unosiya mari yekurarama kune mari.
Bvumira iwe kuti usvike pakushanduka kwemari.
Inogona kutokubatsira kusiya basa raunozvidza.
Uye zvakare, iwe unogona kuenda pamudyandigere nekukurumidza kana iwe uchida.
Imwe yeanonyanya kushanda mapoinzi iwe aunogona kuita kuti uwane mari nekukurumidza kutenga yako network kubasa, kupedza nguva uchitsvaga zvakanyanya sezvinobvira, pamwe nekuwana kukwidziridzwa kana kukwidziridzwa. Izvi chete zvinogona kukubatsira kuti uwane imwezve $100 pazuva nekukurumidza.
Nekudaro kana iwe uchiri kudzidzira, kugara pamba amai (kana baba), kana uchitsvaga nzira dzakasiyana dzekuita mari, ndakuvharira!
KUKURUMIDZA ZANO REKUITA $100 PAZUVA ONLINE: Unogona kuita imwe mari nekutanga yako blog! Ndakabva pa$0 kusvika pa$3,878 mushure memwedzi mitatu chete. Ratidza kuti ndakazviita sei nekushanyira saiti ino!
Ngatinyure mazviri: pano idzo nzira dzinonyanya kushanda dzekuita mari muna 2022. Pasinei nekugona kwako kuita, unogona kuwana chimwe chinhu chiri munzira yako.
Kunyatsoita $100 pazuva: 36 yekufungidzira inoreva kuita mari
Kuita mari yakawedzerwa hakufaniri kuva kwakaoma. Pane zvakawanda zvingangoitika zvehupfumi zvakapoteredza.
Kana iwe ukabvuma kuisa awa kana kupfuura pazuva mune chimwe chinhu chauri kufarira pane kuona Netflix kana kufunga nezve Instagram, iwe unozoshamiswa pane zvaunogona kuwana.
Uye zvakare rangarira:
Kana iwe uchida kuzadzisa chinangwa chako chekugadzira $100 kana kutopfuura pazuva online (kana kuti kunze kwenyika), ingobatanidza akasiyana siyana aya ekuita mari mazano.
Uye zvakare madhora anozovaka nekukurumidza!
1. Tora chikamu muchidzidzo chetsvakiridzo (zvinosvika $150/awa).
Kana iwe uchida kuita madhora zana kana anopfuura pazuva, ino ndiyo nzvimbo yakanaka yekutanga pasina ruzivo rwakawanda kana hunyanzvi!
Iwe unogona kugovera maonero ako mumapoka ekutarisa. Bhizinesi riri kutsvaga vanhu vane certification kuti vapinde muzvidzidzo zvavo zvekutsvagisa, uye haufanirwe kuve nyanzvi kuti ubatanidzwe.
Nguva pfupi yadarika ndakagamuchirwa kutora chikamu muchidzidzo chetsvakiridzo yerunako: $150 kweawa yenguva yangu! Zvakanaka kugadzirisa mimwe mibvunzo ine chekuita nemaitiro angu ekuchengeta bvudzi!
Individual Meetings ikambani iri pamutemo inopa vanotora chikamu chezvidzidzo kune ani nani anoida. Uye ivo parizvino vanohaya vanhu kune dzimwe nyika!
Mubhadharo unobva pamadhora makumi manomwe neshanu kwehafu yeawa yenguva yako kuenda kumadhora mazana mana nemakumi mashanu kune zvimwe zvidzidzo zveawa imwe chete.
Misangano Yega Yega ine zvidzidzo zvakasiyana, zvinobata zvidzidzo zvakati wandei: tekinoroji yemazuva ano, chikafu, zvinhu zvinogara kwenguva refu, nhengo dzemhuri, software, zvekuzvivaraidza, mhuka dzemhuri, mitambo, zvekufambisa, kunaka, masocial network, mimhanzi, unozvipa zita!
Vane vamwe vatengi vanoshamisa, kusanganisira Pinterest, Spotify, Vistaprint, Wayfair, Tack, pamwe nezvimwe.
Aya ndiwo mashandiro ayo:.
1. Unonyorera kutora chikamu muzvidzidzo zvaunofungidzira kuti zvakakunakira iwe.
2. Muongorori/mutsigiri wetsvagiridzo anoongorora mhinduro uye anotumira kukoka kune vakanyatsokodzera vanopindura.
3. Kana ukagashira kukokwa kuti ubatanidzwe, unosarudza nguva yakakunakira kubva kune yakaitwa nemutsvakurudzi.
4. Mushure mekunge mapedza tsvakiridzo, munobhadharwa nePayPal, mari, kana Amazon.com present cards.
Zvakatowanda zvinoreva kuwana $100 muawa.
Kana iwe uchida kuwana mari nemapoka anotarisisa, rimwe repamusoro-rakapihwa repamutemo bhizinesi Respondent.io.
Respondent.io inogara ichitsvaga nyanzvi dzemusika, vanaamai nanababa, uye vadzidzi. Vane mabasa anowanikwa kune varidzi vedzimba vekuUS pamwe nepasirese. Izvi zvinoratidza kuti haufanirwe kunge uri muUnited States kuti upinde uye uwanewo kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu pakudzidza.
Zvese zvaunoda kuti ubatanidze iPayPal account uye zvakare ingave Facebook kana LinkedIn kuti ubatanidze chimiro chako.
2. Wana mari yekutora ongororo.
Kutora ongororo pamhepo inzira iri nyore, isina-brainer yekuita imwe mari.
Ndakaedza nzvimbo dzakawanda dzekuongorora kuti ndione kuti ndedzipi dzinoshanda zvakanyanya. Mazhinji emawebhusaiti ekudzidza haana kunaka. Zvinotorawo nguva yakareba kuita mari yakakwana, uye zvakare haufe wakapa chitupa. Zvakadaro Swagbucks pamwe neKudzidza Junkie zviri pamutemo!
Iwo maoko-pasi angu maviri anofarirwa ongororo mafemu kuita mari yakawedzerwa!
Swagbucks: yangu yandinofarira app yezvidzidzo uye mari yekudzosera. Ndakawana mari inopfuura $200 mugore risingasviki! Iwe uchawana yemahara $5 bhonasi inopihwa paunojoinha.
Kudzidza Kupindwa muropa: yakanakisa ongororo sarudzo yekusarudza kubva, yakapusa kuvimbisa, uye zvakare kugadzira mari. Yangu favourite ongororo webhusaiti chete!
Izvi zvidzidzo zviviri zvakatemerwa zvakasarudzika paTrustpilot pamwe nemazana ezvipupuriro! Pamusoro pekunge ndaedza ese ari maviri, ndinofanira kubvuma.
Imwe kambani yekuwedzera yeongororo yandinoda ndeye LifePoints. Inopihwa munyika makumi mana, uye zvakare kune yakawanda ongororo yekutora kubva. Imwe neimwe inotora maminitsi gumi kana mashoma.
Zvizhinji zvezvidzidzo izvi zvinogona kutorwa uchiona yaunofarira TV series! Iwe zvechokwadi haungapfume kana kuita zana remadhora pazuva nezvidzidzo chete, asi haungatambise nguva yakawanda, uye zvinokubatsira iwe kusvika nekugadzira imwezve $100- $ 5 pazuva!
3. Huya kuva mutengi.
Kana iwe uchida kutarisa-tarisa, wakadii kuzviitira kune vamwe? Ne Instacart, iwe zvechokwadi uchashanda seyakazvimirira nyanzvi inopa magirosari evamwe vanhu.
Pane yakanakisa kugona kuita mari hombe, kunyanya nhasi.
Unogona kuita madhora makumi maviri neshanu paawa panguva dzekushanda, kunyangwe avhareji iri pakati pemadhora gumi kusvika pamadhora makumi maviri paawa.
Izvo hazvigone kuve nyore: iwe unowana wakapihwa odha, unotenga odha, unobhadharwa!
Iwe gadzira yako chaiyo tsika pamwe nekutora maodha ako, uye kuchinjika ndiko kunoita kuti ive yakanaka, kunyanya kana wakaganhurira nguva kana kugara pamba amai kana mudzidzi.
4. Ita mari yekuona mavhidhiyo pamhepo.
InboxDollars iwebhusaiti inoshamisa yekuita mari nezvidzidzo. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuita mari nekuona bhaisikopo renyowani, zvirongwa zveterevhizheni, mavhidhiyo emukurumbira, nhau dzichangoburwa, uye akati wandei mamwe mavhidhiyo. Zvakare uye iwe uchawana mubairo wemadhora mashanu nekunyoresa chete.
Zvisinei inoshanda sei?
Zviri nyore kwazvo! Ingonanga kuInboxDollars.com pamwe nekupinda kuti uone rondedzero yemavhidhiyo emavhidhiyo aripo kuti utarise. Iwe uchaona mavhidhiyo pafoni yako kana laptop komputa. InboxDollars mushure mezvo zvinokupa mubairo wekuvaona nesarudzo yako yemari yemahara kana makadhi aripo emazita ane mukurumbira emhando.
Iwe unofanirwa kuona ese ezviratidziro mune yerondedzero yekutamba, saka gadzirira uye zvakare tora snacks zvese seti! Iwe unogona kutarisa kuti inguva yakareba sei iyo playlist inomhanya usati watanga kuona, uye playlists kubva kune akati wandei maminetsi kusvika pahafu yeawa.
5. Fukidza motokari yako.
Une motokari here? Zvakadini nekuisa kushambadzira pairi uye kuwana mari? Ne Wrapify unogona kubhadharwa mari inosvika madhora mazana mana nemakumi mashanu ekuti mota yako yakaputirwa nechishambadzo.
Iwe unofanirwa kudhawunirodha Wrapify app, uye ipapo ivo vanozotevera nzendo dzako kusvika wasvika makumi mashanu mamaira. Kana wangosvika ku50 mamaira, unokwanisa kutora chikamu muchirongwa. Imwe neimwe mushandirapamwe ichaisa ads pamotokari yako kwe50 kusvika gore.
Munguva yese iyoyo unenge uchiwana mari yemahara pamwedzi!
Kuti uve unokodzera kutora chikamu muchirongwa, unofanirwa:.
Iva 21 kana kupfuura.
Iva nekutyaira kwakachena (uye zvakare mhosva) rekodhi.
Iva nemotokari inobva muna 2008 kana kuti itsva.
Ini ndinofunga iyi inzira huru yekuita mari, asi zvakare ipfungwa huru yekuunza mari nyore. Kana iwe uchiri kutyaira uchitenderera dhorobha, wadii kuita mari nazvo?
6. Ipa mabasa ako emaoko.
Kana iwe uri munhu wekugadzira, wakambofunga nezvekutengesa hunyanzvi hwako pamawebhusaiti seEtsy?
Dani pandaiva nemakore gumi nemanomwe, takagadzira pfungwa yekutengesa zvidhori zvemunyu zveXmas. Zvakanaka, zvifunge kana kwete, mumwedzi yakati wandei, takakwanisa kushandura madhora zviuru!
Nekugadzira uye nekupa hunyanzvi hwako, unogona kuseta yako chaiyo maawa, kushandisa mazuva ako kugadzira zvinhu zvaunofarira kugadzira, pamwe nekuwana mari panguva imwe chete.
Nzira iri pano ndeyekuita shuwa kuti unonyatso gadzira zvinhu zvinozopa.
7. Dhawunirodha uye isa maapuro maviri aya uye uite $2 nekuenda painternet.
Tora iyo Nielsen Chikumbiro uye ita madhora makumi mashanu pagore.
Mumazuva ekare, Nielsen aigara achiunganidza ruzivo nekutevera zvibodzwa zveterevhizheni. Ikozvino, ivo vatoenderera mberi, uye vanoshuvira kuwana vanhu vakaita sewe kuti vavabatsire kudzidza ramangwana repasi-pamhepo.
Nekungoisa application yavo pane yako smart kifaa, ivo vanozokubhadhara iwe $50 pagore kana ukaramba uri muUnited States.
Chishandiso chinounganidza huwandu hwemawebhusaiti aunoenda uye kuti unogara kwenguva yakareba sei. Yese data yakaunganidzwa ndeye ANONYMOUS, uye haina kubatana newe chero nzira!
Mount UpVoice Side yekuwedzera pamwe nekuita madhora makumi manomwe nemashanu kana anopfuura.
UpVoice inzvimbo nyowani yemunhu inobhadhara inobhadhara vanhu madhora makumi manomwe neshanu muAmazon aripo makadhi ekugara achibhurawuza mamwe mawebhusaiti (seYouTube, Twitter, Yakabatanidzwa, uye Amazon.com!). Paunenge uchisefa, UpVoice inongounganidza data ine chekuita nekushambadzira kwaunoona uye ichienzanisa neruzivo rwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwekugadzira ruzivo rwekushambadzira kwemhando.
Iri kuwanikwa zviri nyore mune 2 mafomu matsva- a Windows 10 application kana yekuwedzera yeEdge browser.
Uye zvakare haufanirwe kunetseka nezve chengetedzo uye chengetedzo yedata rako! Chero mhando yeruzivo UpVoice inoratidza vatengi vavo inogara isingazivikanwe uye yakaunganidzwa, uye ivo havambogovane chero mhando yeruzivo rwemunhu kana chinangwa kana kutarisa vatengi vega.
8. Ita imwe yekuwedzera madhora zana ekuzororera kwechipfuwo chemhuri.
Kana iwe uchifarira mhuka, kugara kwemhuri yekugara inzira inotyisa yekuita mari yakawedzerwa.
Kuzorora kwembwa yemhuka kunochinjika zvakanyanya sezvo iwe uchisarudza nguva yekuzviita, uye iwe unogona kuikwana pane yako wega maitiro. Zviri nyore kunyangwe ukashanda nguva yakazara, sezvo uchigona kupedza nguva panguva yekuzorora kwevhiki uchichengeta shamwari dzedu diki.
Vagabond ndiyo nzvimbo yakanaka yekutanga!
Inopa masevhisi akasiyana kune varidzi vemhuka uyezve, kana uchinge wanyoresa navo, iwe zvechokwadi uchave nekugona kuita sarudzo iyo yaunoda kushandisa kune vako vangangove vatengi:.
Imbwa yemhuka inofamba.
Kukwira kwembwa dzinovaraidza.
9. Dzidzisa vana chinhu chipi nechipi paIndaneti.
Uye ndinoreva chero chinhu! Kubva pakubika kusvika pakukodha!
Wakamboziva here kuti unogona kuita mari inopfuura zviuru gumi zvemadhora pamwedzi pamhepo, sezvinoita Jade?
Online mentor ari kushandura zvachose nzira iyo vana vanowana kuchikoro uye zvakare kubva kumba.
Zvakare kana iwe uchida kugovera kunzwisisa kwako, unogona kutora mukana wekuchinja uku. Zvese zvaunoda kubatana kwewebhu uye zvakare komputa yelaptop, uye unogona kutanga kuunza mari nhasi.
Uye haufanirwe kuve murairidzi ane ruzivo rwechinyakare. Iwe unongofanirwa kufarira kudzidzisa vechidiki vari pasi pemakore gumi nemasere.
Nzvimbo dzakaita seOutschool dzinokutendera kuti uratidze chero rudzi rwechidzidzo kubva kune nyore kwekwako pekugara.
Unogona kudzidzisa misoro isingachinji seChirungu uye masvomhu, kana makirasi anonakidza sekuita, kuimba kwezwi kana kudhirowa.
Detailed classified inoenderana, uye zvakare Outschool inokupa iwe neyakakwana sisitimu yekuitisa makosi online.
Vadzidzisi paOutschool vanowana madhora makumi matatu nemashanu paawa yekudzidziswa.
Asi iwe une kutonga kwakazara pamusoro pemutengo wakanyorwa wekosi pamwe nenhamba yevatori vechikamu. Outschool inotora 30% yemari yako yekutsigira mhinduro. Kana kirasi yako yatanga, iwe unowana mubhadharo kuburikidza nePayPal.
Kuratidza pamhepo inzira inoshamisa yekuita mari yakawedzerwa, kunyanya panguva ino kutenderera!
10. Wana mari yekutamba mitambo yemavhidhiyo online.
Iwe unodyara zvisingaperi maawa uchitamba mitambo pafoni yako iwe usina zvachose chekuita? Chaizvoizvo sei kutenderedza kubhadharwa kuita izvozvo?
Mistplay ndeye pamutemo Android application inokubhadhara iwe kutamba. Iyo ine pamusoro pe78,000 wongororo paGoogle Play, uye inoyera chiyero chenyeredzi ina!
Kana iwe uchida kutanga kuwana mari:.
Dhaunirodha programu yacho.
Isa mutambo mune yako runyorwa.
Mushure me2 kusvika ku5 mins yekunakidzwa, iwe unozotanga kugadzira mayunitsi.
Govera zvaunofunga pamutambo wevhidhiyo nevagadziri vekugadzira akawedzera masisitimu.
Vagadziri vezvirongwa vanozoshandisa zvaunotaura kuti uwedzere mitambo yemavhidhiyo usati wavatanga pamusika zviri pamutemo.
Kana wangosvika pamidziyo yakakwana, unogona kuatora emahara emakadhi echipo emutengo, anosanganisira makadhi echipo eVisa, makadhi eAmazon aripo, Google Play, iTunes, PlayStation makadhi echipo, pamwe nezvimwe.
Iwe haungapfume nekushandisa iyi application, asi inzira huru yekuita mari nekuita chimwe chinhu chaunotoita!
11. Ita mari yekufamba.
Vazhinji vedu tinoziva kuti tinoda kuramba takasimba kuti tirambe takasimba! Uye zvakare iwe uri kuyedza kusvika kune ako zviuru gumi zviito pazuva zuva nezuva!
Zvakadini nekuwana mari kune izvozvo? Unogona!
Mapurogiramu akaita seSweatcoin anozoripa iwe pane yega yega chiito chaunotora.
Ichi chishandiso chinondibatsira kuti ndiwedzere kukurudzirwa kuti ndirambe ndakagwinya, kukwira masitepisi imwe nguva pazuva, uye zvakare kufamba zvakatowanda! Uchaita $100 pazuva nekungoshandisa Sweatcoin? Kwete, kwete zvakare kuvhara. Nekudaro ndeye yemahara inotyisa application iyo inogona kukuwana iwe mibairo yakanaka yechinhu chauri kuita izvozvi.
12. Pedzisira uri mubatsiri wepamhepo (uye ita kusvika $4,000/ mwedzi).
Iwe unogona kuwana imwe yakanakisa mari inoshanda kubva kumba kwemaawa mashoma pazuva nekuuya kuzove mubatsiri wedhijitari (inenge $35- $ 50 paawa!).
Digital aides inoda kuve nehunyanzvi hwekutarisira hwakasimba, kurongeka zvakanyanya, pamwe nekuziva neblogging/social media.
Kune akasiyana marudzi emabasa edhijitari mubatsiri anogona kubatsira sevhisi nawo. Mamwe mabhizinesi anoshandisa VA kuti arambe ari pairi nemae-mail, rutsigiro rwevatengi online, mabhurogi anogadziridza, Facebook, Twitter, Instagram, kana Pinterest.
Kana iwe uchivavarira kuwana zvakawanda nezvekuva mubatsiri chaiwo uye ese mabasa aunogona kupa kune vangangove vatengi, ini ndinokukurudzira zvikuru kuti uongorore nyaya yaAbbey.
13. Pindura mibvunzo nemari.
Kana uri kuUS, unogona kuwana mari ingangoita $100ka gore (ehe, haisi typo) nekugadzirisa zvinonetsa pamhepo.
JustAnswer inobatanidza nyanzvi dzekurapa, vagadziri vezvirongwa zvesoftware, nyanzvi dzepombi dzemvura, vamiriri vemutemo, pamwe nedzimwe nyanzvi kune vanhu vanoda mhinduro kumibvunzo.
Iwe unongoda komputa system kana smartphone uye yewebhu link. Iwe unogona kuseta ako maawa, sarudza iyo inobvunza kune mhinduro, pamwe nekuwana mari nekubatsira vanhu online.
Ingoita chokwadi chekuti une hunyanzvi hwakanakisa, uye iwe unogona kungosaina kuti ubhadharwe, uye zvakare uchabhadharwa mwedzi nemwedzi uchishandisa PayPal.
Kana iwe uine humwe hunyanzvi, unogona kuhushandisa zvakanyanya uye kuita rimwe basa remahara kubva kumba!
Asi zvakadaro ungawana sei mukana wekuzvimiririra?
Kune akawanda mawebhusaiti anokubatsira iwe kutsvaga basa repadivi kuti ushande chikamu-nguva kubva kumba. Unogona kubatsira maawa mashoma pazuva semuongorori, mubatsiri wepamhepo, muchengeti wemabhuku, munyori, maneja wesocial network, mudzidzisi, transcriptist ...
Sarudzo hadziperi, uye iwe unogona kunge uchigadzira kusvika kumadhora zana paawa!
Iyo inonyanya kushanda nzira yekutsvaga freelancing gigs ndeyekunyoresa kune aya anotyisa internet masaiti:.
15. Tungaira vanhu.
Kana iwe uchida kuwana madhora zana nekukurumidza uye zvakare uine mota nerori, kutyaira vanhu munzvimbo yako yekutandara inogona kuve nzira yakanaka yekuwana imwe mari yekuwedzera yaunoda nekukurumidza.
Makambani akanakisa ekujoinha ndeaya:.
Iwe unofanirwa kufunga nezve devaluation yemotokari pamwe chete nemari yauri kuisa mugasi, asi kana iwe uchigadzira maererano nenzendo dzaunobvuma kuita uye zvakare usatyaira kure kure kuti utore pikicha, unenge uchikwanisa. kuita mamwe madhora zana pazuva.
16. Kupa chikafu.
Kana kugovera mota nerori nevanhu vausingazive hakusi kwako, uye iwe unowanzo kugovera burger uye mamwe mafrench, kana pizza, mushure mekupa chikafu inogona kuve sarudzo yako yakanakisa.
Kune mamwe mafemu akanakisa kunze uko achakubatsira iwe kuwana imwe mari padivi nekuendesa chikafu munguva yako yekuzorora, husiku, kana kupera kwevhiki.
Semuenzaniso, unogona kusaina kuUber Eats zvemahara mumaminetsi mashoma. Iko hakuna muripo kana zvipikirwa zvenguva, saka unogona kushanda nechako chenguva. Iwe unogona kubhadharwa nemutengo-wemahara kamwe pasvondo pasi mubhadharo, kana iwe unogona kutambisa ipapo chero nguva yaunoda, kanenge kashanu pazuva. Zvese zvaunoda i-smartphone yekurodha uye kuisa iyo app uye sarudza yako yekutanga kutumira!
17. Delive for Amazon.com.
Imwe nzira yekuita mari ndeyekuunza kuAmazon.com Flex. Unogona kuita pakati pemadhora gumi nemasere kusvika pamadhora makumi maviri nemashanu paawa, izvo zvinoratidza kuti unogona kuita madhora zana pazuva nekungoshanda maawa mana.
Asi zvinonyatsoshanda sei? Iwe unotora mapakeji kubva pakati peAmazon nzvimbo kana masevhisi, dhawunirodha app inokupa iwe yekukurumidza kutumira kosi yekutevedzera, pamwe nekupa iwo mapakeji.
Iwe unogona kuseta nguva dzaunokwanisa kushanda uye kuvaka yako routine pane zvaunoda. Kune mikana mazuva manomwe pasvondo, saka hazvina basa kana wakasununguka zvachose.